Vhura sosi Hardware. Tsanangudzo uye hunhu | Linux Vakapindwa muropa
Vhura sosi Hardware. Tsanangudzo uye hunhu
En los zvinyorwa zviviri zvakapfuuras isu takazvipira kutaura nezve zvakarongwa kushaya nguva uye kunyora mamwe mhinduro kuchinetso ichi kubva pane yemahara uye yakavhurika sosi software. Zvino, isu tichataura nezvevaya vanoedza kusvika nyaya yacho kudivi rehardware. Tiri kutaura nezve Open Source Hardware Association (OSHWA). Tichatorawo zvimwe zvakavhurwa zvemhando yepamusoro
1 Basa reOpen Hardware Association
2 Vhura sosi Hardware
3 Vhura Hardware Mwedzi
4 Mamwe mapurojekiti akavhurika ehurdware
5 Mapeji ane akavhurika Hardware mapurojekiti iwe aunogona kuita
Basa reOpen Hardware Association
Zvinoenderana nezvavo peji peji
Iyo Open Source Hardware Association (OSHWA) inovavarira kusimudzira ruzivo rwehunyanzvi uye kukurudzira kuwanikwa, kwekutsvagiridzana kutsvagisa iyo inoremekedza rusununguko rwevashandisi. Mabasa makuru eOSHWA anosanganisira kubata iyo Open Open Hardware Summit uye kuchengetedza yakavhurwa sosi Hardware chitupa, icho pinogonesa nharaunda kuti ikurumidze kuziva uye kumiririra Hardware inosangana nedudziro yenharaunda yeakavhurwa sosi Hardware.
Vhura sosi Hardware
Vhura sosi Hardware ndeyekutil ane dhizaini inowanikwa pachena kune chero munhu kuti afunde, kugadzirisa, kugovera, kuvaka uye kutengesa, Izvi zvinoshanda kune zvese zvepakutanga uye zvigadziriso zvichibva pairi. Pamusoro pezvo, ruzivo rwese rwunodiwa runofanirwa kuwanikwa mune rakakodzera fomati kuti vakwanise kuita shanduko kwavari.
Imwe poindi yekuchengetedza mupfungwa ndeyekuti yakavhurwa sosi Hardware Iwe unofanirwa kushandisa zvakakwirira zvekuwanika zvinhu uye zvishandiso, zvakaenzana maitiro, zvakavhurika zvigadzirwa, zvisina kudzivirirwa zvemukati, uye maturusi asingade marezenisi ekushandisa ekushandisa kwavo.
Kuti usimbise yakavhurwa sosi Hardware rezinesi, OSHA inoda zvinhu zvinotevera:
Zvinyorwa: Sezvatakataura pamusoro, zvinyorwa zvinofanirwa kuwanikwa pamwe chete neicho chigadzirwa kana nechiratidzo chakajeka chekuti ungachiwana kupi. Muzviitiko zvese, kubereka kwayo kuri nyore kunofanirwa kuvimbiswa. Zvinyorwa zvinodiwa kuti zvibvumidze nyore kuchinjika. Semuenzaniso kuve mune yechinyakare fomati yekombuta-yakabatsira dhizaini dhizaini. OSHA haidi izvozvo, asi musimudziri wemahara anogona kuona kuti mafomu eakavhurwa sosi mafaira anoshandiswa nemvumo. Izvo zvinosungirwa kutsanangura chikamu chei dhizaini chinosunungurwa pasi pezinesi.
Zvirongwa zvemakomputa: Kana icho chinhu chichida kushandiswa kwesoftware, iye anogadzira anogona kusarudza kugovera chirongwa pasi pechibvumirano chakavhurika kana kupa ruzivo rwese rwakakosha kuti vamwe vagadzire zvavo.
Mabasa Anogadzira: Musiki weHardware Iwe unofanirwa mvumo yekugadzira, kutengesa, kugovera uye kushandiswa kwezvigadzirwa zvakagadzirwa kubva kune ekugadzira mafaera, mafaera pachawo, uye zvigadzirwa zvechero zvataurwa pamusoro.
Kugoverwa: Hapana munhu anogona kubvumidzwa kuishandisa chero chikonzero. yeiyo Hardware kana zvinyorwa zvayo, uyezve kusada chero rudzi rwemuripo pakutengeswa kwayo nenzira yekodzero.
Kushandisa kwemahara: Hapana mhando yekushandisa inogona kudzivirirwa, nenzira imwecheteyo, mashandisiro ayo haakwanise kugadzirisirwa kushandiswa kana kwete kweimwe Hardware kana software.
Vhura Hardware Mwedzi
Izvo zvakangoitika netsaona kuti ndakafunga kunyora chinyorwa ichi seOSHWA inopemberera "Vhura Hardware Mwedzi." Vhura peji ino yewebhu zviwanikwa zvinogona kuwanikwa zvekuparadzira izwi nezve yakavhurwa sosi Hardware.
Mamwe mapurojekiti akavhurika ehurdware
Arduino: Kit yemabhodhi uye ma controllers ekuvaka emagetsi zvigadzirwa.
Axiom: Camera yekuvaka modular mabhaisikopo.
Raspberry Pi: Line kamwe bhodhi makomputa.
Mugadziri Resources yekuvaka ndege.
Mapeji ane akavhurika Hardware mapurojekiti iwe aunogona kuita
Chokwadi tiri kusiya mapurojekiti akaita sePinephone ayo vamwe vangu vatotaura nezvakawanda. Ichokwadi ndechekuti nerombo rakanaka, kupihwa kuri kuramba kuchikura uye sezvakatoitika mahara uye yakavhurwa sosi software, tinogona kutarisira kuti, kunyangwe isingaite muyero, ichasvika pakukwana kwakaringana kuisa mutsika kune zvakarongwa kushaya basa.
Iwe unoziva, dhizaini kana kushandisa chero yakavhurika Hardware chirongwa? Iwe unayo yaunopa fomu yekutaura kuti utiudze nezve ako zviitiko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Vhura sosi Hardware. Tsanangudzo uye hunhu
Euro Rori Simulator 2 uye American Rori Simulator: nyowani multiplayer kuwedzera
Vhura sosi dzimwe nzira dzekurwisa kurongerwa kupera